UJohanna Fadul (uDanielle eCatalina) wenza abalandeli bakhe bahlanyahla ngesithombe ngaphandle kwe-bra futhi bemkhombisa amabhuzu. - ITELE RELAY
Novelas okwamanjeABANTU & LIFESTYLE
UJohanna Fadul , ebeyingxenye yochungechunge lwamanoveli aphumelele "UCatalina (uSenosos hay hay Paraíso)" , lapho adlale khona "UDaniela Beltrán" , ishicilela njalo Izithombe futhi amavidiyo phezu kwakhe amanethiwekhi omphakathi , lapho ebuyela khona abalandeli bakhe abahlanyayo , ngoba iningi lezincwadi zakhe libonisa umzimba omncane.
Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule futhi esebenzisa isikhathi sakhe samahhala, UJohanna uye wayefuna ukuthatha izithombe emkhombisa amabhlokhi futhi engenayo i-bra , lapho yena uqobo ekhombisa lokho thanda umzimba wakhe , noma ngabe unayo cellulite .
PDT: Ngiyayithanda i-cellulite yami, ngiyawuthanda umzimba wami, ngithanda ukungapheleli, ”kusho uFadul eposini lakhe le-Instagram.
Kungakhathaleki ukuthi yini okungaba ukungapheleli kwemidwebo yanamuhla yomphakathi, izinkulungwane zabalandeli balesi sehlakalo esihle baye bahlanya ngezithombe zakhe, lapho ungabona khona lo wesifazane omuhle ngezingubo zangaphansi nangaphandle kwe-bra, okukhombisa amabhuzu akhe nesibalo esincane.
Kuze kube manje, ukushicilelwa komlingisi we "UCatalina (uSenosos hay hay Paraíso)" ngaphezulu Ukuthandwa okungu-181 namakhulu okuphawula.
Ama-telenovelas amasha okuqala konyaka wesikole ka-2016 Iziteshi zokuqala -…
TELES RELAY 17714 izikhala 1 amazwana
Inkantolo yezobugebengu yamazwe omhlaba ihlole ukuqulwa kwecala likaLaurent Gbagbo